Fairphone 3, taleefan waara | Abuurista khadka tooska ah
Fairphone 3, waa taleefan waara
Shirkadda Shirkadda Dutch Fairphone ayaa hadda soo saartay taleefankeeda cusub ee loo yaqaan Fairphone 3, iyo sida ay iyagu isu cibaadeystaan, mobiil loo hibeeyay dadka meeraha.
Waxaan ka helay aaladan cusub mid aad u xiiso badan, runti waxaan aaminsanahay in bulshada maanta ay dhibaato dhab ah ku qabaan deegaanka iyo in laga soo saaray warshadan wax soo saarkooda oo naga caawinaya xalinta dhibaatadan waa talaabo aad muhiim u ah.
Waa telefoon "cadaalad ah" Waayo? Sababo dhawr ah awgood:
Se kala furfuraan si fudud dayactir lagu sameeyo
Iska ilaali xabagta
Qalabka dib loo rogay oo kaliya laga helay
Ballanqaadka Ganacsi caddaalad ah
Waxay sidoo kale na siisaa faa'iidooyin kale oo taxane ah, sida:
Amaanka ayaa cusbooneysiiya rubuc kasta, oo ah cusbooneysiin u dhow nooca Andorid.
Batariga la saari karo Muddo dheer, isla hal mar batteriga ayaa socon doona maalinta shaqada oo dhan waxaana si dhaqso leh loogu beddeli karaa bateriga hadda shaqeeya.
Gudbi a 12MP kamarad, xaaladaha iftiinka yar
A64GB kaydinta gudaha
5.7 inch shaashad
Kani waa nooca saddexaad ee loo yaqaan 'Fairphone', ujeeddada shirkaddu waa in dadka isticmaala ay sii haysan karaan taleefannadooda gacanta muddo dheer, 5 sano ama xitaa ka badan. In sidan yaree qiiqa kaarboon dioxide labadaba warshada iyo rarka.
Inta badan waxyaalaha ku jira modullada sidoo kale waa la beddeli karaa. Kuwani, oo ay weheliyaan isku xirayaasha, ayaa loo calaamadeeyay inay ka caawiyaan dib u dhiska.
Shaki la'aan waa shey aan u arko mid aad u xiiso badan. Waa inaan ka digtoonaano wax kasta oo ka dambeeya aaladaha noocan ah oo aan ka fikirno xal u raadinta ama raadinta waxyaabo kale oo ka mid ah soo saaristooda.
Ma ogeyd isaga? Ma ahan aniga, laakiin waxaan fiirsanayaa oo aan rajeynayaa in shirkadaha waaweyn sida iPhone ama Samsung ay iyaguna sameeyaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fairphone 3, waa taleefan waara
Ganacsi caddaalad ah ama ganacsi aan caddaalad ahayn ayaa weli ah.
Tuurista terminaalkaagii hore ama aan sidaa u weyneyn si aad u iibsato tan muwaadin aduunka ka warqaba, joogtaynta iyo blah blah waxay noqonaysaa qalad weyn sababtoo ah saamaynta aan wanaagsanayn ee ay isleedahay.
Qaab su'aal gal ah oo loogu sii socdo raasamaalnimada ruug-cadaaga ah waa in la liqo sharaf leh oo kaliya sababaha keena lagama maarmaanka ujeeda dhabta ah ee dhaqdhaqaaqa: in la sii wado iibsashada.
Waa inaan ku bogaadinaa beddelka habka wax loo qabanayo, laakiin taasi maahan oo keliya iibsashada qalab kale oo cusub oo, si kadis ah, u nadiifiya boorsooyinkeena, sidoo kalena nadiifiya damiirkeenna. Oo buuxi qasacadaha qashinka.
Ku jawaab creativonline
Microsoft waxay soo bandhigaysaa Surface Neo, oo ah kiniin laba-shaashad leh oo aad u fiican